NEED is accepting application form for MFI/ EVF
NEED Plans in 2013 NEED Expansion and Training Programs for 2013 The Network for Environment and Economic Development Burma is excited to announce two new training programs for 2013! We have been very busy planning and we are expanding our programs into Burma/Myanmar for the first time. NEED will have two different training programs in 2013.
Our Model Farm Initiative in Chiang Mai will be hostingashorter, three month long academic training focusing on Land, Law and Economics (LLET). This training will be very challenging and we have designed it to prepare participants to work in the fast changing areas of Land Rights, Foreign Direct Investment, Global Economics, Land Law, and Community Development
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း တပ်မတော်က လယ်ယာမြေများကို အများဆုံး သိမ်းယူခဲ့ပြီး ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းများ၏ သားသမီးများထံ လွှဲပြောင်းထားခြင်းများကို စစ်ဆေးတွေ့ရှိရကြောင်း သိရ
တပ်မတော်ကလယ်ယာမြေများကိုအများဆုံး သိမ်းယူခဲ့ပြီး အချို့ကို
မြန်မာ့စီးပွားရေး ဦးပိုင်လီမိတက်၏ အမည်ပေါက်ပြောင်းလဲထားခြင်း၊ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းများ၏သားသမီးများထံ လွှဲပြောင်းထားခြင်းများကို စစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ရကြောင်း ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်၊ လယ်ယာမြေနှင့် အခြားမြေများ
သိမ်းဆည်းခံရမှုကြောင့် ပြည်သူများ နစ်နာမှု မရှိစေရေးအတွက် စုံစမ်းရေးကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင်၊ ကျောက်ဖြူမဲဆန္ဒနယ်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်ဦးဘရှိန်က ပြောကြားခဲ့သည်။
တောင်သူလယ်သမားအရေး ကူညီမည့် ကော်မတီ NDF ဖွဲ့စည်း ရန်ကုန် (မဇ္ဈိမ) ။ ။ တောင်သူလယ်သမားများအရေးအား လွှတ်တော်သို့ တင်ပြပေးနိုင်မည့် ‘တောင် သူ လယ်သမားရေးရာ ဗဟို လုပ်ငန်းကော်မတီ’ ကို အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအင်အားစု NDF ပါတီက ဗုဒ္ဓဟူး နေ့တွင် ဖွဲ့စည်းလိုက်ကြောင်း ပါတီခေါင်းဆောင် ဒေါက်တာသန်းငြိမ်း က ပြောသည်။
တောင်သူလယ်သမားများ ငြိမ်းချမ်းစွာ ချီတက် ဆန္ဒပြပွဲ စတင်
မတူကွဲပြားခြင်းနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးပါတီက ဦးဆောင်တဲ့ တောင်သူလယ်သမားတွေရဲ့ ငြိမ်းချမ်းစွာ ချီတက် လမ်းလျှောက် ဆန္ဒပြပွဲကို ဒီကနေ့ မနက်ပိုင်းက ရန်ကုန်တိုင်း မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ် ထောက်ကြန့်မှာ စတင်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီဆန္ဒပြပွဲမှာ လယ်ယာမြေ အဓမ္မသိမ်းယူခံခဲ့ရတဲ့ တောင်သူ (၂၀၀) လောက် ပါဝင်ခဲ့ပြီး၊ ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်
လယ်သမား ၇ ဦး ကို စစ်တပ်က ဖမ်းဆီး
ပဲခူးတိုင်း အနောက်ခြမ်း၊ ပြည်ခရိုင်၊ ပန်းတောင်းမြို့နယ်အတွင်း လယ်သမား (၇)
ဦးကို ကာကွယ်ရေးပစ္စည်း ထုတ်လုပ်ရေး ပစ္စည်းစက်ရုံ ကပစ (၃) စစ်တပ်က ဒီကနေ့
မနက်က ဖမ်းဆီးလိုက်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဒီဖမ်းဆီးမှုနဲ့ ပတ်သက်လို့ လယ်သ
မားတွေကို ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ နိုင်ငံသား
နဲ့ နိုင်ငံရေး အခွင့်အရေး လှုပ်ရှားသူများ
အဖွဲ့က ကိုရဲထင်ကျော်က RFA ကို အခုလို
"ပန်းတောင်းမြို့နယ် မြေစာရင်းရုံးကို သွားမယ်ဆိုတဲ့ လယ်သမား (၇)
ယောက်ကို စစ်တပ်ကနေပြီးတော့ ဖမ်းလိုက်တယ်။ အဖမ်းခံလိုက်ရတဲ့ လူတွေရဲ့နာမည်က ဦးတင်အောင် အသက်
၆၅ နှစ်၊ ဦးအောင်ကြည် ၅၆ နှစ်၊ ဦးထွန်းဟန် ၅၆ နှစ်၊ ဦးကျော်ကျော်လွင် ၂၅
နှစ်၊ ဦးမင်းနိုင် ၃၀ နှစ်ခန့်၊ ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး နယ်မြေ ၄ ခုက လယ်ယာမြေ ဧက စုစုပေါင်း ၃၂၀၀ ကျော် အသိမ်းခံခဲ့ရတဲ့ တောင်သူ လယ်သမားတွေဟာ မနေ့မနက်က မြို့ရွာနဲ့ အိုးအိမ်ဦးစီးဌာန ရုံးရှေ့ကို သွားရောက်စုဝေးပြီး မိမိတို့ နစ်နာဆုံးရှုံးရတာတွေ အတွက် ဖြေရှင်းပေးဖို့ တောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။
သာမန်အိမ်ရှင်မတစ်ဦးရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစိတ်ကူးမှ နိုင်ငံတော်ကြီးဆီသို
တစ်ဦးအတွက် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် ရေးဆိုတာကတော့ သူကိုယ်တိုင် ဦးစီးနေရတဲ့မိသားစု အိမ်တခုရဲ့အခြေခံကျတဲ့
မီးဖိုချောင်ကနေလာပါတယ်။ ပုံမှာ ဖေါ်ပြထားသလို
လျှပ်စစ်ထမင်းအိုးနဲ့ ချက်ရတာ အချိန်ကုန် လည်းသက်သာ၊လူလည်းမပင်ပန်း၊ ထင်း၊ မီးသွေးတွေနဲ့ချက်ရတာ
ဈေးလည်းမသေးသလို အဆင်မသင့်ရင်အိမ်ပင် မီးလောင်နိုင်သေးတယ်၊၊ အေးဒီမီးကို တခြားအိမ် တွေကိုပင် ကူးစပ်လို့
ရပ်ကွက်တစ်ခု လုံးပြာကျသွားနိုင်တယ်။ ဒါ့အပြင် လျှပ်စစ်ထမင်းအိုးဆိုတော့ ခလုတ်နှိပ်ပြီးရင်
ပြီးတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုင်စောင့်နေစရာလည်ူးမလိုပါဘူး။ အေးဒီကြား ထဲမှာ ပေါ်လာတဲ့အချိန်တွေကို
မိသားစုအတွက်၊ ရက်ရေးရွာ ရေး တခြားကိစ္စများအတွက် အကျိုးရှိအောင် အသုံးချနိုင် ပါသေးတယ်။
အကယ်၍ အိမ်ရှင်မ ကိုယ်တိုင်ကလည်း သူ့ယောင်္ကျားနဲ့ တန်းတူအပြင်မှာ နေ့တိုင်း အလုပ်ထွက်လုပ်နေရတယ်ဆိုရင်လည်း
အလုပ်ခွင်ထဲမှာ စားဖို့နေ့လည်စာကို အေးဒီထမင်းအိုးနဲ့
Embassy Of The Union Of MyanmarAustralia22 Arkana Street, Yarralumla,Act 2600, Canberra AustraliaTel : (61-2) 6273 3811 61-2)6273 3751 Fax : (61-2) 62734357 Email : Mecanberra@Bigpond.ComWeb-Site : Http://Www.Myanmarembassy-Canberra.Com ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်
UN Agency ရုံးများလိပ်စာ
Office of the Resident Co-Ordinator of the United Nations(UNDP)System's Operational Activities For DevelopmentNo. 6, Natmauk Road, YangonPh : 542910 to 542919 Office of the United Nations Population Fund(UNFPA)No. 6, Natmauk Road, YangonPh : 542029 ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်
MFI, Celebration of Rice Harvesting, Nov, 22, 2012
MFI activities in Jan- April, 2012
Changing in Burma
MFI activities and EVF initiation/ NEED- Myanmar
MFI computer students' blogs
make green forests for our future
Community Development Project in Rakhine
Community Development Training in Rakhine
MFI's activities in 2011
ดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี - by DownloadDD.com
- YouTube Civil war
Guest #24046323's software updates at Software Informer
Burmatoday Burmese Fonts Place
Adobe - Download free trial version Adobe Photoshop CS5.1 | Adobe
Font ဒေါင်းလော့ဒ် လုပ်ရန်
Making funny photo
G talk ဒေါင်းလော့ဒ် လုပ်ရန်
BBC Burmese -ရေဒီယို
Printer Canon MP 280/287 download
Blog အသစ်တွေ ဘယ်လိုဖန်တီးမလဲ
Myanmar News Blog: daily Myanmar news
MFI school graduation in 2011
ပြောချင်တာလေးတွေ ဒီမှာ ထားခဲ့ပါ
DVB Youth Voice v2.0
Ministries in Myanmar @ Myanmar.com
တရုတ်နိုင်ငံမှ ကျောက်ဖြူတွင် တည်ဆောက်မည့် ဖွံ့ဖြိုးရေးဇုံ
Rice harvesting celebration at MFI school in Nov, 2011
Eco-home at MFI in 2012
MFI students on practical class in 2011
Seed collecting Game at MFI school, 2011
Organic crops from Our farm.
Growing mushroom with Straw at MFI school, 2011
Testing Bio Gas in MFI school, 2012
International Web site list
สมัครงาน หางาน (Jobs Board)
I am moon, I was born on 19, 8, 1981 in Arakan State, Burma.
NEED - Video မှတ်တမ်းများ
Professor of Ran goon Precollege and Director of NEED meeting at NEED on Nov, 2011
MFI ကျောင်းသားများ လေ့လာရေးခရီးထွက်ခြင်း
Community Development training in Rakhine state
livestock breeding at MFI school 2012
MFI school ၏ လုပ်ငန်းစဉ်အချို့
Students from American Rollins college visited to MFI school, Jan, 2012
myanmar invironmental project
Model Farm Initiative 2
Fore to grow Biofuel
Director of NEED is explaining about activities to students from Yan goon precollege
MFI and Singapore students are at workshop
MFI school in 2011
Where would you like to go to
Kaldan Project Update: December, 2012
NEED - Burma
The Arakanese Meeting Point - Where Arakanese Women & Men Meet
Narinjara News Online
Warmly welcome to our country